Sary hosodoko, sarimihetsika na fampisehoana opera no vokatra madio am-boalohany. Tonga zavakanto ihany izy ireo rehefa hitan'ny olona iray farafaharatsiny mandika azy ireo
Teny nalaina momba ny zavakanto
Nandritra ny taonjato maro, manam-pahaizana maro no naneho ny fomba fijeriny tamin'ny fomba tena samihafa momba ny famaritana ny zavakanto. Mizaha amin'ny alàlan'ny fanangonana ireo teny nalaina mahafinaritra indrindra momba ny zavakanto sy ny mpanakanto:
Ireo vehivavy mpanakanto antonontonony no masiaka indrindra amin'ny fitsarana ny zava-bitan'ny zavakanto an'ny hafa. Marie von Ebner-Eschenbach
Ny tsiambaratelon'ny zavakanto dia ny manitsy ny natiora. Voltaire
Ny fikatsahana zava-kanto dia mitaky fahalalahana, ny fetra azo ampiharina. Johann Jakob Mohr
Tsy tokony ho manam-pahaizana ilay mpanakanto fa tokony ho olona nahita fianarana. Ny zavakanto dia mijaly kokoa amin'ireo mpanakanto tsy dia nahita fianarana loatra noho ny zavatra hafa rehetra. Ahemotra avy eo amin'ny sehatry ny fahalalana ambony izy io ary lasa artisanal. Heinrich Wilhelm Josias Thiersch
Ny tanjon'ny zava-kanto dia tsy ny fanairana ny fifanarahana, fa ny hampihetsiketsika azy. Walter Hasenclever
Ny tanjon'ny zavakanto dia tsy maintsy atao mba hampifaliana na hanandratana. Tsy hitako izay antony hafa misy an'io. Ny iray dia antony tsara, ny iray kosa andriana ambony. Edward Burne-Jones
Ny endrik'ireo zavakanto dia vokatry ny atiny, toy ny hafanana avy amin'ny afo. Gustave Flaubert
Ny zava-kanto dia miompana amin'ny tsy fahita amina sangan'asa kanto. ovid
Amin'ny endriny mahazatra, ny zava-kanto dia fomba fanao ara-môraly tsara amin'ny fanabeazana sy ny fitaizana ny fiarahamonina, satria tsy manome voninahitra ny fomba amam-panao ivelany fotsiny izy io, fa mahatonga ny saina ho tia ny tsara koa amin'ny tsiro ny hatsarana. Otto Pfleiderer
Ny zava-kanto dia manidina amin'ny marina, fa amin'ny fikasana mafy tsy ho may. Franz Kafka
Ny zavakanto dia manana tanjona mahaleo tena; tsy te hitory fitondran-tena izy, fa kosa hiravoravo amin'ny hatsarana; fa arakaraka ny itadiavany lalindalina kokoa sy an-tsakany sy an-davany io tanjona hafahafa io no vao mainka mahatonga ny saina hanaiky ny fahazarana amin'ny fomba ambony kokoa amin'ny teny. Christian Oeser
Ny zavakanto no feon'ny fieritreretan'ny olombelona. Friedrich Hebbel
Ny zavakanto no endrika mahery vaika indrindra amin'ny fahafantarana an'izao tontolo izao. Oscar Wilde
Seho fotsiny ny kanto, mihoatra ny fitiavana. Friedrich von Schlegel
Ny haavon'ny zavakanton'ny olona dia tsy maintsy refesina, tsy arak'ireo mpanakanto ihany, fa araky ny lazain'ny mpangataka sy ny mpiaro azy. Moritz Lazarus
Izao tontolo izao dia feno fifaliana kely, ny zava-kanto dia mahita azy ireo fotsiny, mitandrina azy ireo. Li Taibai
Manadino an'izao tontolo izao mba hiainany amin'ny asany, ny mpanakanto dia mamorona tontolo iray amin'ny asany. Friedrich Spielhagen
Ny sary dia fanahin'ny zavakanto. William Etty
Ny sary hoso-doko dia tokony ho zavatra bebe kokoa noho ny sombin-doko mahaliana. Ny eritreritra no zava-dehibe. Jervis McEntee
Tsy misy zavakanto mampiasa endrika maro be toy ny mozika haingana. Eduard Hanslick
Azonao ve ny zavakanto tena izy
Mianatra mahita amin'ny maso zato ianao
Mahatsapa ny fitarainany sy vazivazy ve ianao?
Mahatsapa izao tontolo izao amin'ny fo arivo ve ianao.
Tsy asan'ny zavakanto ny maka tahaka ny natiora, fa ny maneho azy! Honoré de Balzac
Ry namako, aza adino velively ity fitsipika volamena ity: tsy misy manimba ny zavakanto raha mbola maditra ianao. James McNeill Whistler
Ny zavakanto rehetra dia misy asa tanana; Antsoiko ny sangan'asa kanto izay ampahan'izany izay azo ampianarina sy hianarana; manomboka eo ny asa-tanana, manomboka ny tena kanto. Otto Ludwig
Ny mpanakanto rehetra dia nanomboka ho mpankafy amin'ny fotoana iray. Ralph Waldo Emerson
Ny tena sangan'asa rehetra dia fitaratra majika izay ahitan'ny fanahinao tena voaravaka. Johann Jakob Mohr
Tsy misy asa hafa afaka manome valisoa ny fo amin'ny fahafaham-po avy amin'Andriamanitra toy ny zavakanto. Peter Rosegger
Ny kanto no varavarankely ahazoan'ny olona ny fahaizany ambony. Giovanni Segantini
Ny sary hosodoko dia zava-kanto miaro ny habakabaka amin'ny toetr'andro ary maneho azy ireo amin'ny mpitsikera. Ambrose Gwinnett Bierce
Tononkalo mangina ny dihy ary hosodoko jamba ny tononkalo. Leonardo da Vinci
Tsy maintsy maheno ireo vorona mihira amin'ny hazo ianao rehefa mijery ny sary! Théodore Rousseau
Andriamanitra ô! Hafa mihitsy ny hatsaran'ny natiora sy ny zavakanto. Amin'ny vehivavy, ny nofo dia tokony ho toy ny marbra. Amin'ny sarivongana, ny marbra dia toy ny hena. Victor Hugo
Matetika ianao no mihaona amin'ny olona mandoko sary, mazàna mazàna olona mandoa azy. Wilhelm Busch
Raha vantany vao manaiky ny mpanao hosodoko sy ny mpaka tahaka fa ny lavitra indrindra dia mbola lavitra ny maha sary azy, dia efa nandroso tsara ny tsiron'ny besinimaro. Eugène Fromentin
Raha mahafaly ny mankafy ny tsara dia fifaliana lehibe kokoa ny mahatsapa ho tsara kokoa, ary amin'ny kanto ny tsara indrindra dia ampy tsara. Johann Wolfgang von Goethe
Manana ny kanto isika mba tsy ho very amin'ny fahamarinana. Friedrich Nietzsche
Izay ahitantsika fa niara-niasa tamina fitsipika sy famintinana ankapobeny ilay mpanakanto, dia hitantsika fa mahantra sy tsy misy dikany ny asany. Ny sanganasan'ireo mpanakanto mahafinaritra, etsy ankilany, dia mitondra ny sarin'ireo olona amam-panahy sy feo mankamintsika miaraka amina fiainana mahafinaritra, haren'ny endrika isam-batan'olona, ​​izay toa somary ambony noho ny zava-misy satria ny fotoana mampikorontan-tsaina azy dia manalavitra. Hermann von Helmholtz
Ny tanjon'ny zavakanto dia ny mamorona toe-tsaina tsotra izao. Oscar Wilde
Ny mahatsapa ny zavatra hitany, mankasitraka izay tsapany, izany no fiainan'ny mpanakanto. Max Klinger
Cover art | am-pianarana
Kanto ho an'ny olon-dehibe